Owuwe ihe ubi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Owuwe ihe ubi
Kedu ka esi akụ physalis
Physalis bụ osisi mara ezigbo mma, nke ndị bi n'oge okpomọkụ na-ahụ maka enweghị nchekasị na iguzogide pests dị iche iche. Ụfọdụ n'ime ụdị ya dị iche iche nwere ike ịmị mkpụrụ osisi ndị bara uru, nke na - eme ka okpukpu abụọ dị mkpa, ya mere, anyị ga - atụle n'okpuru otú physalis si eto na mpaghara ya. Physalis: nkọwa nke osisi Ọbụna ma ọ bụrụ na ị maghị ihe physalis bụ, mgbe ahụ na-ahụ ya na foto a, ikekwe ị ghọtara osisi a mara mma.
Na nkà na ụzụ nke na-eto eto letus romaine na dacha
Isiokwu a ga-ekwu maka ihe kpatara ya ka a ga - etolite letus Romanine na nke gị. A na-akpọkwa salad Roman dịka salad Rom. Ọ bụ osisi a na-eme kwa afọ, a na-achịkọta akwụkwọ ya n'ụdị isi. A na-ewere Romain dịka onye kachasị ochie na onye a kasị mara amara na ụwa, a na-agbakwunye ya na salad Caesar a ma ama.
Iwu maka na-eto eto Savoy kabeeji site na seedlings
O di nwute, obere osisi Savoy adighi adighi nma ya na ndi oru ugbo anyi, n'ihi na otutu na eche na itolite ya bu usoro siri ike na oge. Ọ bụ n'eziokwu, anyị ga-agwa ya n'isiokwu a. Characteristic na pụrụ iche nke savoy kabeeji Savoy kabeeji (Brassica oleracea convar.